Maryan Mursal oo fankeedii dib usoo nooleyneysa. - Wargeyska Faafiye
Home 2015 November 14 .Warka, Headlines . Maryan Mursal oo fankeedii dib usoo nooleyneysa.
Maryan Mursal oo fankeedii dib usoo nooleyneysa.
Ka hor dagaalladii sokeeye ee dalka Soomaaliya ka dhacay, ka hor inta ay qaxooti noqonin, waxaa fududeed in la maqlo codka macaan ee Maryan MursalYaraanteedi waxay fanka ka billowday inay ka heesto meelaha habeenkii lagu caweeyo ee Xamar taasoo ku adkayd gabar ka dhalatay reer Soomaali ah . 14jir markay waxay ku guuleystay inay qaado heestii ay kusoo caan baxday oo ay u duubeen raadiyaha Dowlada Radio Muqdisho.
Kadib waxay kamid noqotay hoboladii Waaberi iyadoo heeso jacayl iyo waddani isugu jira qaaday sidoo kale riwaayadahana kusoo bandhigto Tiyaatarka Soomaaliya iyadoo jilliin fican lagu yaqaanay.
Abwaanadii iyo fanaaniintii ay isla shaqaynayay ayaa ku riyaaqay howsheeda, sanadihii todobaatameeyadii fankeeda xowli ayuu kusocday iyadoo taageereyaal bandanna kuyeelatay bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda, balse markii dambe fankeedi waxaa hareeyay siyaasad iyadoo laga mamnuucay inay labo sano heeso qaado sababo lagu sheegay inay qaaday hees kasoo horjeeda xukunka Milatariga xiligaasi dalka ka tilanayay ee Jaalle Maxamed Siyad Barre.
Maryan Mursal markii heesaha laga joojiyay waxay billowday inay Xamar ka xamaalato waxayn noqotay gabadhii oogu horreysay oo gaari taksi ah ku kaxaysa magaalada Xamar.
Sanadkii 1988 dii ayay dib ubillowday heesaheeda kadib markii ganaaxa laga qaaday balse nasiib wanaag labo sano kadib waxaa billowday dagaalki sokeeye ee dalka Soomaaliya, 1991dii Maryan Mursal waxay la tacaalaysay helitaan magangelyo waxay isku martay, Kenya, Itoobiya, Jabuuti illaa ay Denmark iska diwaan geliso.
Iyadoo u waramaysa barnaamijka fanka ee jariiradada The Current ayaa waxay tiri “waxaan ahay Daanish Madow ah,’’ Maryan oo iyada iyo 5 carruur ah oo ay dhashay ku qaadatay nolasheedi qaxootinimada dalka Denmark.
Hadda oo ay 65 jir tahay codkeedi isma bedelin waxayna kamid tahay dadka magaca wayn kuleh fanka Soomaaliyeed waxay u safar tagtaa waddamo badan oo aduunka ah oo ay Soomaalida ku noolyihiin kuwaasoo jecel codkeeda waxaya isbuucan kusugnayd gobolka Minnesota oo ay ka qabatay bandhig faneed iyo tababarro.
Gobolkani ka tirsan Mareykanka oo ay Soomaali badan ku noolyihiin ayaa si weyn looga riyaaqey fankeeda, waxayna dad badan Maryan soo xusuusineysaa waayihii bari samaadkii.
Farmaajo oo laga yaabo in uu soo noqdo.
US raises alarm over illegal cash transfers.
Golihii adeegga garsoorka Soomaaliya oo la kala diray.
Afar kamid ah Saraakiishii qaarajin rabtay madaxweyne Erdogan oo la qabtay